Hubka Guriga Lagu Sameeyo - Ikkaro
Hubka guryaha lagu sameeyo
Fur qayb la yiraahdo Hubka Guriga Lagu Sameeyo Wuxuu ahaa go'aan adag. Ma nihin dagaal rabshad nama soo jiidaneyno laakiin ka dib markii aan dib u eegnay maqaalkii Ikkaro waxaan ogaanay in sanadahan aan wax ka qabanay macluumaad badan oo ku saabsan qaansooyinka guryaha lagu sameeyo, qoryaha xadiidka, iyo hubka xafiiska. Maaha hub ay adeegsadaan, bastoolado iyo qoryaha darandooriga u dhaca, laakiin waa marka la kala saarayo, in kasta oo ay na dhaawaceyso
Ma dooneyno in qofna sameeyo hub lagu sameeyo xumaanta, laakiin in aan waqti la qaadanno saaxiibbada, sida qof u garaaca darts, maxaa yeelay waxay ku tooganayaan qaanso ama qalin qori. Inta badan waxyaabaha ku jira qaybtaan waxay sameeyaan hub loo qaadan karo inay yihiin alaab-tooyyo, bilaawaabyo shilimaad ah, kataloogyo goos goos ah ama qoryo gaas ah oo ay ku jiraan magnets-ka carruurta. Xiisaha fudud.
Sidaa darteed, ha u eegin qaybtan wax aan ahayn hiwaayad fudud ama ka baxsan xiisaha saafiga ah si loo arko sida farsamo cayiman u shaqeyso. Yaan waligii la ciyaarin dilaa masduulaagii? Mise qaanso ayaa lagu sameeyay ul iyo xarig? Mise buun-buun lagu tuurayo kubbadaha waraaqaha ah fasalka? Mudane, kuwani waa hub, hubka guryaha lagu sameeyo, aan iska ilowno macnaha xun ee ereyada.
Ma aaminsani in macluumaadkani ku dhiiri gelinayo qofkasta inuu sameeyo hub oo uu u adeegsado si xaasidnimo ah maadaama ku dhowaad shay kasta loo isticmaali karo waxyeello. Laakiin haddii aad hesho maqaal aad u malaynayso inuu meesha ka baxsan yahay, fadlan nala soo xiriir annaguna si farxad leh ayaan dib ugu eegi doonnaa.
Sida loo rido giraangir
Waan arki doonaa sida loo sameeyo qaanso leh cirifka wareega mootada. Mabda 'ahaan ma noqon doonto qaanso aad u xoog badan, laakiin waa lagama maarmaan in la awoodo in lagu isticmaalo fogaan dhan illaa 20 mitir, oo aad ku raaxeysan karto bartilmaameed.
Ilmo ahaan waxaan Waxaan sameeyay daraasiin qaansooyin ah, oo leh nooc kasta oo laamo ah, qoryo iyo caagag. Aniga oo adeegsanaya xargaha, tuubbooyinka baaskiilka, iwm laakiin weligay iguma soo dhicin in aan qaansada sidan u sameeyo Aniguna waxaan leeyahay giraangir duug ah oo aan horey u aqaanno waxa ay qabato.
Sida loo sameeyo macmacaanka guriga lagu sameeyo ee loo yaqaan 'Trebuchet catapult'
Hubaal waad jeceshahay katarabiyaal, qof kastaa wuu jecel yahay iyaga :) Iyo haddii aan ka dhigi karno kuwo ka weyn, ka fiican sida ka fiican.
Tan aad sawirka ku aragtaa waa a trebuchet katarabital. Waxaa jira boqolaal ka mid ah siyaabaha loo sameeyo katarabiyadan. Laga soo bilaabo moodooyinka waawayn, sida hubkii qarniyadii dhexe ee hubka wax lagu weeraray ilaa moodooyinka yaryar iyo kuwa guryaha lagu sameeyo
Sida loo sameeyo madax fallaar leh
Aragtida waa mid aad u fudud, in kastoo aan u maleynayo in ficil ahaan ay noqon doonto mid aad u dhib badan.
Farsamadan ayaa ina xusuusinaysa habka dhagaxaan xardho si aad uhesho madax-fallaadho taariikhda hore. Waxayna aad ugu egtahay sawirka ina tusaya a madax fallaadh obsidian ah oo loo yaqaanno galaaska volcanic.
Ka faa'iideyso gooladaha salka dhalooyinka quraaradaha ah qaabka fallaadh. Uma baahnid inaad doorato dhalooyin aan sal lahayn ama aad u jajaban.
Sida loo sameeyo xarig leh fiilooyinka khudradda
Waxaan ka helay fiidiyowgaan halka ay noo sharxayaan sida loo sameeyo xarig leh fiilooyinka khudradda. Maaha ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo mindi guriga lagu sameeyo oo laga sameeyo miinshaaro hore.
Sida aad u aragto, waa hab aad u fudud oo lagu helo cmindi guriga lagu sameeyo.
Marka aan mid leenahay daab miinshaaro wareegsan si aan u tuuro, waxaan dib u warshadeyn karnaa si aan u helno dhowr mindiyo oo cabbirkoodu kala duwan yahay.
Sida loo sameeyo falaaraha bamboo
Muddo ka hor ayaan aragnay sida loo sameeyo qaanso waxaanan leenahay qaar ka mid ah moodooyinka loogu daawashada badan yahay ee loogu talagalay qorista qoraallada.
Laakiin qaansadaas waa la waayey f arrow. Maalmahan waxaa badanaa lagu sameeyaa ulaha kaarboonka, laakiin halkan waxaan dooneynaa inaan ku tusno sida loo sameeyo fallaaro dhaqameed leh ulo baasaboor.
Sida loo sameeyo qori bilaaba kubadaha ping pong
Waxaan horay u aragnay nooc ka mid ah qoryaha ayaa bilaabay kubbadaha pingpong. Laakiin maanta waa qaab bastoolad ka sii badan, ejhehe
Sawirku wuxuu si cad u caddaynayaa sida loo dhisay, markaa wax badan ma xoojin doono. Kaliya ku dhaaf sawir leh cabbiraadaha si shaqadaadu ugu fududaato.
Qodobkaan waxaan uga hadlaynaa abuurista hubka xafiiska u Hubka Xafiiska. Hubka lagu abuuri karo alaabada xafiis ee caadiga ah, waraaqo waraaqo ah, balastarro, qalin, qalin qori iwm Si taxaddar leh wax uga qabta.
DIGNAYN: Sida hubka kale ee xafiiska, wuxuu noqon karaa mid aad u khatar badan oo waxyeelo keenaya. Si taxaddar leh u isticmaal.
Catapult oo leh clips
Waxaan ku bilaabaynaa qaybta Hubka Xafiiska o hubka xafiiska.
Xaaladdan oo kale ayaan muujineynaa sida loo sameeyo kabaha loo yaqaan 'katapilad' oo ay ku jiraan clips iyo cinjir caag ah.
Tani buste fudud Waxay ka kooban tahay laba qaybood. Dhinaca dhinac taageerada iyo dhinaca kale miisaanka miisaanka, kaas oo lagu hawlgelin doono koox laastik ah
Aynu ku aragno dhismaha taageerada laba sawir oo fudud
Sidee loo sameeyaa qalin is-weydaarsi
Waxaan u daynay tusaalahan xiisaha leh si aan u dhisno a isweydaarsi xafiis oo qalin leh, qalin iyo 7 xarig oo caag ah.
Waa farshaxan kale oo lagu tilmaamay inuu yahay hubka xafiiska.
Qoriga hawada ee is dulfuulan
Maalin dhaweyd waxaan ka tagnay cajalad fiidiyoow ah oo ku saabsan sida loo sameeyo qoriga guriga lagu sameeyo tallaabo tallaabo
Maanta waxaan ku ballaarineynaa fiidiyowyo xiiso leh
Qaabka 3D ee qoriga.
Dhisida qoriga hawada oo la cadaadiyo oo ka kooban seddex qaybood:
Bogga1 Bogga2 Bogga3 Xiga →